संसारकै महंगो खानेकुरा, जसको मुल्य सुन्दानै होस उड्छ
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ मङ्सिर १६ आइतबार |
काठमाडौँ । संसारमा यस्तो खानाकुरा छन् कि जसलाई खानको लागी एक वर्षको कमाइले पनि सम्भव नहुने देखिएको छ । हामी खाना बिना बाच्न सक्दैनो । बाच्नको लागी खाना निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । तर संसारमा यस्ता महंगो खानेकुरा छन् । जुन खानेकुरा खानको लागी धेरै पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
पिज्जालाई सबैजसो मानिसले निकै मनपराएर खाने गर्दछन् । पिज्जा बनाउनको लागी खान जति स्वादिलो र मिठो हुन्छ, बनाउनको लागी पनि त्यत्तिकै गाहो हुन्छ । जो मानिस निकै महंगो र मिठो पिज्जा खान चाहन्छ, त्यस मानिस स्कटल्याड जानुबाहेक अन्य देशको विकल्प छैन् ।
यस देशमा पाइने पिज्जा २४ क्यारेट सुन खानु जस्तै हुन्छ । किनकि यहाँ एउटा पिज्जाको मुल्य भारतीय रुपमा २ लाख ७० हजार छ । पिज्जाबाट प्रोफिट भएको पैसा नन प्रोफिट फाउडेशनमा दिने गर्दछन् । यस फाउडेशनले अन्धो मानिसलाई आँखा हालिदिन्छ ।
यस आइसक्रिमलाई देख्ने बित्तिकै सबै मानिसलाई खान मनलाग्नेछ ।उक्त आइस क्रिमको क्रिमको नाम गिनिज बुक अफ वल्ड रेकडमा पनि राखिएको छ । यो आइसक्रिमको मुल्य संसारमा जति पनि आइक्रिम बनेका छन् त्यस मध्येको महंगो आइसक्रिम हो । यस्तो किसिमको आइक्रिमको मुल्य १६ लाख रहेको छ ।
३. एक्सपेन्सिप केक
संसारकै सबैभन्दा महंगो केकमा यो केक पर्दछ । यस्तो किसिमको केक श्रीलंकाको एक शहरमा पाइन्छ । एक केकको मुल्य एक कारको मुल्य बराबरको रहेको छ ।
वर्गरलाई पनि सबैजसो मानिले मनपराएर खाने गर्दछन् । संसारमा यति महंगो वर्गर छ कि जुन वर्गर पैसा तिरेर खानको लागी निकै असम्भव छ । किनकि यस वर्गरको मुल्य ३ लाख भन्दा बढि रहेको छ ।
केभियर संसारको सबैभन्दा महंगो फुडमा एक हो । जसको मुल्य करिब १ किलोको २२ लाख जति पर्दछ । यस्तो टेस्टलाई निकै अजिव रुपमा पनि लिइने गरिदो रहेछ ।
केभियरको शक्ति यस्तो हुन्छ कि माछाको पेटमा रहको कुरा सजिलै बाहिर निस्कन्छ । जस्तै अण्डाको फुल ।
लिंगको नाप र खुकुलो कन्डम,के–कस्तो घरेलु उपाय अपनाउन सकिएला ?
एयर होस्टेजको हर्कत !
मेथीले स्वास्थ्यको साथै सुन्दरतामा निखार ,अरु के के ?
बिहे रोकिएको गाउँ,सिमानाको साक्षी !
पुर्व प्रथम महिलाको भेषमा ठगी
एक डेटले फेर्यो काचुली
यसकारण तात्दै छ समुद्र ,संकटमा ह्वेल